Self-assessment for Coronavirus
कुल संक्रमित: 93676888
मृत्यु संख्या: 2005585
निको हुनेको संख्या: 66963319
यदी तपाईं कोरोनाभाइरस (COVID-19) सन्क्रमित भएको संदेह छ वा तपाईंको सम्पर्कका कोसैलाई भएको आशन्का छ भने, कृपया थप जानकारी र आफु संक्रमित भएको नभएको भनेर निर्धारण गर्नको लागि यस आत्म-मूल्यांकन उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई सास फेर्न वा अन्य गम्भीर लक्षणहरू अनुभव गरि रख्नु भएको छ भने, कृपया निम्न लिखित नम्बरहरुमा १११५ अरूबाट करिब २ मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। सम्पर्क गर्नुहोस् तर स्वयेम अस्पतालमा नजानुहोस्। कृपया पहिले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी कर्मी लाई कलगरेर खबर गर्नुहोस । तपाईका लक्षण र यात्रा ईतिहासको बारेमा जानकारी गराउनु होस।
आत्म-मूल्यांकन शुरू गर्नुहोस्
यो जानकारी चिकित्सा सल्लाह प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको होइन।यदि तपाईंसँग मेडिकल प्रश्नहरू छन् भने, एक स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
English मैथिली तामाङ नेवारी
ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद
फेरि शुरु गर्नुहोस्
के तपाईं निम्न लक्षणहरू मध्ये कुनै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ?
सास फेर्न गाह्रो हुने (उदाहरणका लागि, प्रत्येक सासको लागि संघर्ष गर्दै, एक शब्दमा बोल्दै)
गम्भिर छाती दुख्ने
उठ्न सार्है गार्हो महसूस हुने
छैन छ फेरि शुरु गर्नुहोस्
अघिल्लो प्रश्नमा फर्कनुहोस्
के तपाईंले निम्न लक्षणहरू मध्ये कुनै एक वा सो भन्दा बढी लक्षणहरू अनुभव गर्नु भएको छ?
सास फेर्न कठिनाइ (उदाहरणका लागि, प्रत्येक सासको लागि संघर्ष गर्दै, १० सेकेन्ड भन्दा बढीको लागि सास रोक्न सक्दैन)
के तपाईं तलका कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ?
ससाना बच्चाहरूमा लक्षणहरू फरक हुन सक्छन (उदाहरणका लागि, सुस्तता, खानमा रुची नलाग्नु)।
के तपाईंले गत १४ दिनमा नेपाल बाहिर यात्रा गर्नुभयो?
के तपाईसँग हाल सालै सम्पर्क रहनुभएको कसैसँग COVID-19 छ (उदाहरणका लागि तपाईको घर वा काम गर्ने ठाउँमा)?
के तपाईं श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू (उदाहरणका लागि ज्वरो, खोकी वा सास फेर्न गाह्रो) भएका व्यक्ति जसले भर्खरै बिदेश यात्रा गर्नुभएको छ, उहाँसँग गर्नुभयोसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ?
फेरि मूल्यांकन गर्नुहोस्
कृपया निम्न लिखित नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुहोस् १११५ र समय लिएर नजिकको आपतकालीन विभागमा जानुहोस्। अरूबाट करिब २ मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्।
कृपया फोनमा COVID-19 को लागि क्लिनिकल मूल्यांकन खोज्नुहोस्।
कुनै एक बाट सम्पर्क गर्नुहोस्:
कृपया फोनमा COVID-19 को लागि क्लिनिकल मूल्यांकन खोज्नुहोस्। तपाईंको प्राथमिक हेरचाह प्रदायक (उदाहरणका लागि, परिवार चिकित्सक) भर्चुअल मूल्यांकनका (virtual assesment) लागि
नेपाल सरकारको हट लाइन १११५ वा यी नम्बरमा नर्ससँग कुरा गर्न कल गर्नुहोस्
तपाईंले के गर्नु पर्दछ:
अत्यन्तै जरुरी काम अथवा जरुरी भेटघाटका लागि मात्रै घर छोड्नुहोस् र सम्भव भएसम्म फोन वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस अथवा साथी, परिवार र छिमेकीको मद्धत लिनुहोस्।नयाँ विन्डोमा खुल्छ आत्म अलग (Self isolation)बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
अधिकांश COVID-19 का बिरामीहरूमा हल्का लक्षणहरु मात्र देखिन्छन्। एक चिकित्सकले मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि तपाइँलाई थप हेरचाह वा सम्भावित व्यक्तिगत परीक्षणको आवश्यक पर्दछ कि पर्दैन । उहाँहरुलाई जानकारी दिनुस् कि तपाईंले यो आत्म-मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गर्नुभयो।
यदि तपाईं बिग्रँदै गएको लक्षणहरू अनुभव गर्न थाल्नुभयो भने, कृपया तपाईंको स्थानीय आपतकालीन विभागलाई संपर्क गर्नुहोस्। तपाईं जानु अघि कल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई बताउनुहोस् कि तपाईंले यो आत्म-मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गर्नुभयो।
नेपाल सरकार को COVID-19 हटलाइन नम्बरमा धेरै कलहरु आउन्छन्, तेसैले तपाईंको कल पर्खाइमा हुनसक्छ। तपाईंको संपर्क चाडो भन्दा चाडो स्थापित हुनेछ । धैर्य गर्नु होला ।
थप जानकारी तथा अन्य स्रोतहरू
सार्वजनिक स्थलमा आफूलाई COVID-19 बाट बचाउन, आफ्नो हातहरू बारम्बार धुनुहोस्, र अरूबाट करिब २ मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्।
नेपालका लागी COVID-19 को बारेसामान्य जानकारी
ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद .
तपाईं COVID-19 बाट संक्रमित नहुन सक्छ, तर तपाईं लक्षण रहित नभएसम्म आत्म अलग (self-isolate) हुनुपर्दछ।
तपाईंले के गर्नु पर्छ:
अत्यन्तै जरुरी काम अथवा जरुरी भेटघाटका लागि मात्रै घर छोड्नुहोस् र सम्भव भएसम्म फोन वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस अथवा साथी, परिवार र छिमेकीको मद्धत लिनुहोस्।नयाँ विन्डोमा खुल्छ आत्म अलग (self-isolating).
लक्षणहरू सुरु भयदेखी सजग हुनुहोस र आफ्नो स्वास्थ्यको अनुगमन गर्न जारी राख्नुहोस। आत्म अनुगमनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्। नयाँ विन्डोमा खुल्छ self-monitoring.
यदि तपाईंलाई आफ्नो लक्षणहरू अथवा स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको अनुभव हुन थाल्यो भने कृपया स्थानीय आपतकालीन विभागलाई (Emergency) संपर्क गर्नुहोस्। जानु अघि कल गर्नुहोस् र बताउनुहोस् कि तपाईंले यो आत्म-मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गर्नुभयो।
COVID-19 फैलिने जोखिम कम गर्न सामाजिक दूरीको (social distancing) अभ्यास गर्नुहोस्।
अत्यन्तै जरुरी काम अथवा जरुरी भेटघाटका लागि मात्रै घर छोड्नुहोस् र सम्भव भएसम्म फोन वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस अथवा साथी, परिवार र छिमेकीको मद्धत लिनुहोस्। आत्म अलग (Self isolation)बस्ने बारे थप जानकारी लिनुहोस्।नयाँ विन्डोमा खुल्छ self-isolating.
लक्षणहरू सुरु भयदेखी सजग हुनुहोस र आफ्नो स्वास्थ्यको अनुगमन गर्न जारी राख्नुहोस। आत्म अनुगमनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्। नयाँ विन्डोमा खुल्छ आत्म अनुगमन(self-monitoring)।
ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद।
COVID-19 प्रसारणको जोखिम कम गर्न नयाँ विन्डोमा खुल्छ सामाजिक दूरीको (social distancing) अभ्यास गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई निम्न कुराहरु मिल्छ भने नयाँ विन्डोमा खुल्छ आत्म अलग (Self isolation) हुनु होस:
तपाईंको उमेर ७० बर्ष भन्दा बढि छ भने।
तपाईं इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड (immunocompromised) हुनुहुन्छ (उदाहरणका लागि यदि तपाईंसँग एचआईभी /एड्स (HIV/AIDS) जस्ता रोगहरु छन भने, इम्युनोसप्रेसशन थेरापी (immunosuppression therapy) प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ वा क्यान्सरको लागि उपचार वा ट्रान्सप्लान्ट भएको छ भने।
तपाईं बिगत १४ दिनमा बिदेश यात्राबाट नेपाल फर्कनु भएको छ भने।
तपाईं श्वासप्रश्वासको लक्षण भएकाको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने।